China zokubhala Icwangcisa mveliso kunye nabenzi | SJJ
Ngaba usafuna iiSeti zeZinto eziZodwa zokubhala ezisisiseko sobumnandi babantwana? Unokwazi ukujonga iiseti zethu zokubhala ezintle. Izinto zokubhala ze-6pc zibekwe kwityala lokuthwala leplastiki elinomtsalane, kulula ukuphatha, isipho esifanelekileyo sesikolo, ikhaya, itheko okanye amanye amaxesha
Usafuna uKhethekileyo Cwangcisa izinto zokubhalaSisiphi isiseko sokuthanda abantwana? Unokwazi ukujonga iiseti zethu zokubhala ezintle. Izinto zokubhala ze-6pc zibekwe kwityala lokuthwala leplastiki elinomtsalane, ekulula ukuphatha, isipho esifanelekileyo sesikolo, ikhaya, itheko okanye ezinye izihlandlo.
Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokubhala zesikolo, izinto zokubhala zeofisi, iiseti zokubhala zabantwana okanye zonikezelo lwesikolo. Sizimisele ekuphuhliseni iimveliso ezintsha zokuyila zabantwana. Ukuyila, umgangatho ophezulu kunye nokhuseleko ziinjongo zethu.
Ukwazi ngakumbi malunga neekiti ezimileyo ezenziwe ngokwezifiso zegama lakho, ukhetho olululo lokushicilela, uncedo lobugcisa, elona xabiso liphezulu okanye naziphi na ezinye izipho zentengiso zabantwana, zive ukhululekile ukusithumela umyalezo.
Kubandakanya iipensile ezi-2, irula eyi-1, irabha e-1, isilola esi-1, ityala le-1 lePVC elinomtsalane
Uyilo oluvulekileyo ngaphandle kwentlawulo yokubumba kunye nomrhumo wokusetha ukuprinta.
Kulula ukuphatha, isipho esifanelekileyo sesikolo, ikhaya, itheko okanye ezinye izihlandlo
Elungiselelweyo isicelo sakho, kunye ezahlukeneyo ngeesayizi kunye nemibala
Okulandelayo: Abicah isongo kunye neewristbands
Amatyala amakhulu ePensile
Amatyala ePensile apholileyo
Amatyala eepensile zesikolo
Ityala lePensile elithambileyo
Cwangcisa izinto zokubhala